Ilori yokuqala ezimeleyo ijikeleza ngempumelelo e-US | Iindaba zeGajethi
Ilori yokuqala ezimeleyo ijikeleza ngempumelelo e-US
Iimoto eziqhuba ngokwakho iseyiprojekthi iinkampani ezininzi ezisebenza kuyo. Ukusukela oko uElon Musk weza ngaphambili kwaye waqala ukubonisa esidlangalaleni- nakwiwebhu- iividiyo zendlela i-Teslas yakhe esebenza ngayo nenkqubo ye-Autopilot, amanye ama-greats kwicandelo aye atsibela kwi-bandwagon. Nangona kunjalo, oku akuhanjiswa kuphela kwicandelo lezokhenketho, kodwa obu buchwephesha sele buvavanyiwe kwiilori. Y Uvavanyo lokuqala olwenziweyo lube yimpumelelo epheleleyo.
Uvavanyo lwenziwe kwilizwe laseColorado kwaye ulwazi lwatyhilwa liSebe lezoThutho laseColorado (CDOT). Itrakhi esayinwe nguVolvo, njengoko ubona kule vidiyo ilandelayo ukuba siza kukushiya, ibinomsebenzi othile: Khusela ubomi babasebenzi abenza imisebenzi yabo kwiindlela zikawonkewonke.
Uvavanyo lube yimpumelelo. Kwaye ngokwe Iarhente ye-EFE, itrakhi Inobuchwephesha obunxamnye nefuthe kwimvelaphi yasemkhosini. KuLwesihlanu ophelileyo, isithuthi sithathe inxaxheba ekupeyinteni indlela. Umsebenzi wakhe yayikukuhlala ngasemva kwabaqhubi ukuze basebenze ngokuzolileyo. Ngokwezibalo ezikhoyo, yonke imizuzu embalwa ingozi yengozi yenzeke phantsi kwezi meko, ezinye zazo ziyabulala. Ke esona sizathu sokuqaliswa kwezi lori - eyokuqala emhlabeni - kukunciphisa eli nani lokufa.
Kwelinye icala, umsitho weTesla olandelayo oza kwenzeka kulo Septemba uzayo. Ifuna ukunika ulwazi oluthe kratya malunga nelori yombane -kwaye iyazilawula- yenkampani. Ngokwimithombo yeReuters, inkampani ngesele iqale incoko kunye nezinto ezahlukeneyo ukwenza iimvavanyo zokuqala. Kwakhona, ngelixa ikamva labaqhubi beelori lingaqinisekanga, u-Elon Musk uphume wabaqinisekisa. Ucacisile ukuba kusaza kufuneka abaqhubi iminyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ilori yokuqala ezimeleyo ijikeleza ngempumelelo e-US
I-Samsung Galaxy Note 8, ezi zizinto zakho ezisemthethweni